Dadka daggan Istanbul waxay si fiican u neefsan doonaan tayada hawada tareenka dhulka hoostiisa mara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDadka reer Istanbul waxay ku neefsan doonaan hawo tayo leh oo tareenka dhulka hoostiisa ah
11 / 12 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, VIDEO
hawo wanaagsan oo hawo wanaagsan oo hawo mareennada istanbul
IMM waxay bilowday shaqo si ay u horumariso tayada hawada iyadoo la raacayo sharciga qaran ee wadooyinka dhulka hoostiisa mara. Muunado ayaa laga soo qaadi doonaa gaariga, masraxa iyo hoolka tigidhada waxaana la falanqeyn doonaa xogta. Natiijooyinka waa la baari doonaa walxahaasna waa la burburin doonaa isha. Qiimaha PM 10 ee marinnada dhulka hoostiisa ayaa hoos loo dhigi doonaa.
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul (IMM), maalin walba in ka badan 2 milyan oo qof oo u safraya Istanbul si loo kordhiyo tayada hawada ee dhulka hoostiisa ayaa shaqo bilaabay. Mashruucan, oo ay si wada jir ah u fulinayaan Metro İstanbul Aİ iyo İBB Agaasinka Ilaalinta Deegaanka, oo ah qayb hoosaad ka ah collectBB, ayaa xog aruurin doonta Qalabka Qalabka Samaynta ee Qeyb ka ah. Muunado la soo uruuriyay ayaa la baari doonaa isha isha ay ka kooban tahay ayaa la go'aamin doonaa oo lagu burburin doonaa goobta.
Natiijooyinka waxaa lala wadaagi doonaa dadka deggan magaalada Istanbul
Madaxa Tamarta ee Magaalada Istanbul ee Maareynta iyo Maareynta Maareynta Ismaaciil Adiyah, cabirrada waxaa lagu sameeyaa waqtiyada joogtada ah ee cabbirrada iyo 80 mitir cubic mitir halkii ilbiriqsi iyada oo loo marayo taageerayaasha hawada wasakhda ah waa la daadgureeyay, waxaa lasiiyay macluumaadka soo socda ee ku saabsan shaqada:
Waxaan sameyn doonaa cabbiraadaha heerka adduunka. Waxaan go'aansan doonaa tayada hawada ee haamaha tareenka. Waxaan markaa ka shaqeyn doonnaa qaabab horumarineed. Waxaan diiradda saari doonnaa ciribtirka ama yareynta boodhka iyo walxaha ka yimaada isha. Si kastaba ha noqotee, yoolkayagu waa inaan ka dhigno hawada neefsashada mid nadiif ah. ”
Isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay adeegsiga aalado cabir heer sare ah si loo helo xogta sayniska ee tayada hawada, ayuu Adyıl ku nuuxnuuxsaday in xog la isku halleyn karo aan laga heli karin aaladda sahlan. Adirve wuxuu yidhi, almak Waxaan rabnaa inaan helno natiijooyin caafimaad oo aan u gudbino natiijooyinka qaab hufan oo loo helo dadkeenna anagoo taageero ka helayna injineerada jaamacadaha iyo Agaasinka Im ee Ilaalinta Deegaanka. Hadafkayagu waa inaan sii horumarinno tayada hawada. ”
Khubaradu waxay Falanqayn doonaan Hawada
Bahar Tüncel, Injineerka Deegaanka ee Agaasimaha Ilaalinta Deegaanka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, ayaa sheegay inay cabirayaan wasakhooyinka sida maadada qayb ahaan, kaarboon moono-oksaydh, oxygen-ka oksaydh iyo osone-ka xarumaha kala duwan ee 26 wuxuuna yidhi:
Khadadka "Yenikapı-Hacıosman (M2) iyo Kadıköy-Tavşantepe (M4) waxaa lagu qiyaasi doonaa saldhiga 10 oo lagu go'aamiyay 6 xilli maalmeedka. Waxaan hiigsaneynaa inaan go’aansanno tayada hawada ee ay adeegsato marinka dhulka hoostiisa oo shaqaalahana neefsadaan. Waxaan rabnaa inaan ku qaadno qiimayaashan meel aad uga fog heerarka lagu sheegay sharcigayaga qaran ee qiimeynta iyo maareynta tayada hawada. Waxaan ku fulin doonnaa daraasado horumarineed iyadoo la raacayo natiijooyinka falanqaynta .. Iyileştirme
Tuncel wuxuu cadeeyay mabda'a uruurinta macluumaadka ee aaladda "Particulate Matter Sampling Device" wuxuuna cadeeyay inay awood u leedahay inay sawirto sanbalada siigada oo aad u fiican iyagoo sawiraya 2,3 mitir cubic oo hawada ah saacadiiba qeybta qiiqa oo sheegtey inay fursad u heli doonaan inay ku ogaadaan walxaha ay ku jiraan falanqeeyayaasha otomaatiga ah isla markaana ay uruuriyaan muunado shaandhada inta lagu jiro mudada. Cel ka dib hal maalin oo cabbiraad ah, miirayaasha ayaa si otomaatig ah isu beddeli doona. Markaas falanqaynta element ee muunadaha la soo ururiyey ayaa la samayn doonaa. Waxaan go'aansan doonaa tayada hawada, waxaan go aansan doonaa isha wasakhda wasakhda waxaan sameyn doonaa horumarin. ”
Qalabka Saambalka Qaybta
Waa maxay PM10?
Waxyaabaha walxaha ka kooban waxay ka kooban yihiin bir culus sida meerkurida, sunta rasaasta, cadmium iyo kiimikooyinka kansarka iyo waxay halis ugu jiraan caafimaadka aadanaha. Kiimikooyinkan sunta ah waxay isku daraan qoyaan waxayna isu beddelaan acid. Tan iyo soot, duulista duullimaadyada, ashkatada shidaalka iyo naaftada baabuurta naaftada ah waxay leeyihiin walxo waxyeello leh sida maadada loo yaqaan dhuxusha, uur-qaadiddooda muddada-dheer waxay sababi kartaa cudurro waaweyn.
In kabadan 10 microns ee PM waxaa lagu hayaa sanka. Cabbir dheellitirka '10-1 micron' waxay ka gudbaan maraakiibta madax-weynaha, halka kuwa ka yar 2 microns ay aruuriyaan iyagoo gaaraya sambabbada iyo boronkiitada marinka neef-mareenka, halka kuwa dhexroorka 0,1 micron laga dhex qaadi karo madax-dhiig ilaa dhiiga.
Gawaarida Xarunta Magaalada waxay noqon doontaa tayo wanaagsan
Dadka degan Istanbul ayaa waqti yar ku qaadanaya sugitaanka metrobus
Dadka degan Istanbul ayaa si deg deg ah gurigooda u noqon doona
Kormeerka adag ee gaadiidka tayada ee Manisa
Hawo Ka tayo Fiican Magaalada Istanbul Metro
Tareenka Hawada oo Kafiican Tareenka
Waa maxay PM10